Impahla yangaphantsi yeMidlalo ekhoyo kunye neekawusi | Iikawusi zeTerry zeMidlalo-iKawusi zoBantwana-Ubuy
Emva kweminyaka eyi-15 yophuhliso, i-Ubuy iye yaba yenye yeekawusi ezinkulu kunye nabavelisi beempahla zangaphantsi ezingenamthungo e-China.
Ubuy ibekwe kwisixeko saseHaining esisecaleni kweShanghai. Yinkampani yezizwe ngezizwe ezinikeleyo kwaye ikhethekileyo kwiikawusi ezikumgangatho ophezulu kunye noyilo kunye nemveliso yangaphantsi engenamthungo.
Emva kweminyaka eyi-15 yophuhliso, i-Ubuy iye yaba yenye yeekawusi ezinkulu kunye nomenzi wempahla yangaphantsi engenamthungo e-China. Enkosi kubuchwephesha bethu obuphambili
izixhobo kunye neenkqubo zokuyila iisampuli. Iimveliso zethu zokwenyani kunye noyilo zamkelwe kakuhle kwiimarike zamazwe ngamazwe, kodwa sinokukwenza ngokomthengi ngamnye
imfuneko. Iimveliso zethu zonwabela igama elihle hayi eTshayina kuphela, kodwa nakwamanye amazwe zithandwa kakhulu kwihlabathi liphela. Abathengi bethu bavela kuMntla Melika, eYurophu, eOstreliya, eJapan njl.
Ubuy wamkela ngokufudumeleyo abathengi kwihlabathi liphela ukuba basindwendwele kwaye basinike isikhokelo sokuseka intsebenziswano yobuchule, ukuthethathethana ngeshishini kunye nonxibelelwano oluqhubekayo.
1.Imveliso yomgangatho ophezulu
2. UMthengi oyilwe
3. Ukulawula ixesha elimangalisayo
Umthengisi wezinto eziphathekayo othembekileyo, umgca wemveliso ophuculweyo kunye nabasebenzi abanezakhono
Sineqela lethu loyilo kwaye linokunceda umthengi ukuba enze uyilo lwekawusi kunye nempahla yangaphantsi
Sinomthamo omkhulu wemveliso kunye neshedyuli yemveliso enengqondo iya kulawula iSampuli kunye nexesha lokuhanjiswa kakuhle
Sinamava obuchwephesha kwinkonzo ye-OEM ukuba senze ntoni kwiimveliso ezininzi ezidumileyo